Manadio ron-kena | Nutri Diet
Rehefa mitady hihena, dia mitady ny safidy tsara indrindra ho anay foana izahay, amin'ity indray mitoraka ity dia tsy te hilaza fotsiny aminao ny fomba hampihenana ny lanja izahay, fa fomba fanadiovana izay tratra amin'ny alàlan'ny ron-kena matsiro.
Amin'ny fotoana sasany dia mahatsapa ho mavesatra sy mivonto be isika, ny zavamiaina na ny vatantsika dia mangataka fialan-tsasatra amin'ny resaka fidirana ary raha ny marina dia tokony hitandrina tsara isika. Ary hahazoana izany, tsy misy toa a manadio ron-kena.
ny tombony sy tombony Inona no azonao raha mihinana an'io brôma fanadiovana io ianao hahagaga anao izy ireo. Fomba fahandro tsotsotra hatao miaraka amin'ireo akora mora tadiavina izay tsy hahatonga anao hihena kely fotsiny fa hahatonga anao hahatsapa ho tsara kokoa amin'ny tenanao.
1 Tombony amin'ny fanadiovana ron-kena
2 Fomba fahandro manadio
2.2 Toetra mampiavaka azy
2.3 Fanomanana ny ron-kena manadio
Tombony amin'ny fanadiovana ron-kena
El manadio ron-kena Hanome anao tombony tena mahafinaritra izany:
Broth mety ho an'izay tsy maintsy manaraka a sakafo manokana ho an'ny tosidra ambony.
Mahasoa an'ireo miaraka triglycerides avo.
Ireo izay mitady hisoroka fitohanana indraindray. Manana fananana laxative izy ka madio sy voadio ny tsinainy.
Izy io dia mety tsara ho an'ny tranga gout
misakana aty matavy.
Halaviro ny fijaliana matavy u obesidad satria ambany kaloria izy io.
Izy io dia azo lanina amin'ny fotoana rehetra amin'ny taona, mety tsara aorian'ny fihoaram-pefy Noely, na rehefa mitady hampalaza ilay malaza "bikini fandidiana".
Una sakafo hazavana izay hanampy anao hiala sasatra bebe kokoa ho an'ny alina.
Safidy tsara hohanina amin'ny sakafo hariva, na legioma nandrahoina, I ron-kena na manao a ovy nopotsehina.
Este manadio ron-kena manentana ny fihenan-danja, amin'ny tranga maro dia atolotra ho famenon-tsakafo ho an'ny olona sasany izay mila mitombo fihinanana vitamina sy mineraly.
Es tsotra ny manomana, azontsika atao ao an-trano izany nefa tsy misy olana sy tsy tiantsika.
Mahasoa ny fisorohana ny fihazonana ny tsiranoka ary koa manampy amin'ny famongorana azy ireo.
Raha tsy mazàna isika misotroa rano roa litatra isan'androAmin'ny alàlan'ny fihinanana ny ron-kena dia hofarantsika ho ampy ny ranon'ny vatantsika hiasa tsara ny taova.
Azo lany be mafana toy ny hatsiaka, raha zatra ny tsirony isika, dia ho famenony mahafinaritra amin'ny fotoana rehetra amin'ny taona.
Manatsara ny fiasan'ny voa Koa satria manampy amin'ny fanadiovana tsara kokoa izy io, dia manakana ny aty tsy hanangona tavy tsy ilaina izany ary madio sy tsy misy poizina ny tsinainy.
Broth izay azon'ny fianakaviana rehetra atao satria tsy dia lafo loatra.
Fomba fahandro manadio
Rehefa nandroso tamin'ny ny tombon-tsoa amin'ity brothère ity, vitantsika ny mampihena ny habetsahan'ny poizina ao amin'ny vatana, ny fanangonana tsiranoka tsy ilaina amin'ny faritra sasany amin'ny vatana, ny fivontosana ao amin'ny kibony ary hisy fiantraikany amin'ny fahaverezan'ny boky amin'ny ankapobeny.
Ity brothère ity fanadiovana Azonao atao ny maka azy ho lovia voalohany hisakafoanana mandritra ny tapa-bolana mba hahafahan'ny vatanao manala sitraka tsara. Raha efa eo am-panaovana lanja sy manaraka sakafo ianao dia azonao atao ny manampy an'io brothta io tsy misy olana satria tsy hisy fiantraikany amin'ny fihenan-danja izany.
Ny tombontsoa azo avy amin'ity broth ity dia miankina aminy fangaro, izay holazainay etsy ambany:
Kibary seleria 1.
Laisoa na laisoa 100 grama.
sira ranomasina mba hanandrana
Menaka lasopy iray: oliva, voanio, rongony, sns.
Dipoavatra Cayenne hanandrana.
La onion Izy io dia sakafo manankarena mineraly toy ny kalsioma, varahina, manezioma, vy, solifara, vitamina A, B, C ary E. Sakafo mora hita sy tsy lafo. Manatsara ny fiasa sy ny asan'ny voa ary manamora ny fanafoanana ny tsiranoka. Ho fanampin'izany, dia manana hery diuretic lehibe izy io, manampy amin'ny famongorana poizina be dia be izay voangona ao amin'ny vatana.
El seleria Izy io dia singa mahazatra ao anaty lasopy marobe amin'ity karazana ity, izany hoe ireo izay manampy antsika hihena. Miaraka aminy no mihatsara ny fiasan'ny aty, ary koa ny gallbladder sy ny voa. Raha lanintsika tsy tapaka io dia ho voafehy bebe kokoa ny filantsika ary hanana tanjaka bebe kokoa isika.
La tsang Etsy ankilany, mety ho singa tonga lafatra amin'ny fanadiovana ny vatana izy io, azonao atao ny misafidy ny karazana laisoa tianao indrindra, satria izy rehetra dia manana izany fananana manadio izany. Ny laisoa dia manampy antsika hanaisotra ny tavy mihangona ary manala ranon-javatra, ankoatry ny famelana ny ron-kena hanitra tsara.
Farany, ny dipoavatra Cayenne Izy io dia manana fananana lehibe manampy antsika hihena, manampy antsika handevona ny sakafo sy ny tavy tsara kokoa ary hampitombo ny asan'ny metabolismanantsika, izay mahatonga ny vatana handoro kaloria bebe kokoa. Ho fanampin'izany, ny fiasan'ny rà mandriaka dia mitombo ary manampy amin'ny fandroahana ny tsiranoka amin'ny vatana. Fangaro izay miasa amin'ny fomba mitovy amin'ny sakamalao.
Fanomanana ny ron-kena manadio
Ireto misy dingana tokony harahina hahazoana ity volo fanadiovana ity:
Atsofohy ao anaty a vilany lehibe y asio rano iray litatra sy sasany.
Andrahoy ary andrahoina 30 minitra ka manalefaka sy mahandro tsara.
Sakano ny I ron-kena ary raiso ao fifadian-kanina mandritra ny tontolo andro, ho famenonan'ny sakafo lehibe.
ny legioma nandrahoina Azonao atao ny mandany azy ireo ho haingo ho an'ny lovia lehibeo.
Azonao atao raha tianao ny manorotoro azy hanao a ovy nopotsehina, na a tortilla, atody iray voatoto, saosy sns.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Nutri Diet » Vatsim-pivelomana » Manadio ron-kena